Honor 9X wuxuu si rasmi ah u yimid Isbuucaan Isbuucaan | Androidsis
Bil ka hor ayaa lagu dhawaaqay in Honor 9X wuxuu ku sii jeedaa Yurub, in kastoo aan ku sameyn lahaa isbadalo taxane ah. Ugu dambeyntiina, qaabkani waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain, maaddaama nooca laftiisa horayba loo shaaciyey. Moodel dayactiraya inta badan qeexitaanka taleefanka asalka ah, in kasta oo uu leeyahay tiro isbeddello ah, oo muhiim ah.
Maamuuskan 9X waa ikhtiyaar wanaagsan in lagu xisaabtamo inta udhaxeysa heerka dhexe. Waxay nooga tagaysaa qeexitaanno isku dheellitiran guud ahaan, oo aan ka filan karno qaybtan suuqan ah. Marka lagu daro helitaanka qiimo la heli karo, sida caadiga ah astaanta.
Taleefanka ayaa horeyba uga dhex muuqday soo bandhigidiisa qaabeynta, markaad sharad ku dhigayso kamaradda hore ee isbedelaysa. Naqshad kaa caawinaysa inay ka duwanaato moodooyinka kale ee kala duwan, iyo sidoo kale kuu oggolaanaya inaad ka dhigto inta ugu badan shaashadda kiiskan. Dhabarka dambe waxaan ku haynaa saddex kamarad, marka lagu daro dareeraha sawirka faraha.
1 Qeexitaannada Sharafta 9X
Qeexitaannada Sharafta 9X
Heer farsamo ahaan, waxaan kaheleynaa qaab dhex dhexaad ah, taas oo ah qeyb kusocota xawaare wanaagsan. Maamuuskan 9X wuxuu soo bandhigayaa qeexitaankiisa u gaarka ah qaybtan, iyada oo si gaar ah fiiro gaar ah loogu leeyahay kamaradeeda, kuwaas oo shaki la’aan ka mid ah xooggiisa. Waxay sidoo kale nooga tagaysaa baytari wanaagsan, kaas oo na siinaya ismaamul wanaagsan. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Shaashad: 6,59-inch IPS LCD leh FullHD + Xallinta (2.340 x 1.080 pixels)
Keydinta Gudaha: 128 GB
Nidaamka qalliinka: Android 9 Pie oo leh EMUI 9.1 oo ah lakab qaabeyn ah
Kaamirada gadaal: 48 MP oo leh f / 1.8 aperture + 8 MP xagal balaaran oo leh f / 2.4 aperture + 2 MP f / 2.4 sensor qoto dheer
Kaamirada hore: 16 MP oo leh f / 2.2 aperture leh farsamo soo-faneed
Isku xirnaanta: Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 4.2, USB-C, GPS, GLONASS, 4G / LTE
Kuwa kale: Akhristaha sawirka faraha gadaal
Cabirka: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm
Miisaan: 196,8 garaam
Honor 9X wuxuu la yimaadaa kamarad sedex laab ah kiiskan. Dareemaha ugu muhiimsan waa 48 MP, taas oo horeyba caan ugu ahayd bartamaha dhexe iyo heerka dhexe. Iyadoo lala socdo dareemahan waxaan rajeyneynaa xagal ballaaran oo ah 8 MP iyo dareeraha cabbiraadaha qoto dheer, 2 MP kiiskan. Sida caadada u ah sumcadda Shiinaha, kaamirooyinka waxaa ku shaqeeya sirdoonka macmalka ah ee shirkadda si loo ogaado goobta, marka lagu daro in la heli karo qaabab sawir dheeri ah Halka kamaradda hore, oo ay la socoto farsamadeeda, waa 16 xildhibaan kiiskan, oo waliba leh caqli macmal ah
Batarigu waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu caansan, leh awood wanaagsan oo dhan 4.000 Mah. Waa wax ay tahay inay na siiso ismaamul wanaagsan kiiskan, si aan u sii soconno maalinta oo dhan, gaar ahaan marka lagu daro processor-ka uu taleefanka leeyahay. Dhinaca kale, dareeraha faraha ayaa ku jira kiiskan, oo ku yaal dhabarka. Waa wax iska caadi ah in sumcadda Shiinaha ay gadaal ka dhigato moodooyinka dhexdooda ah.
Kadib toddobaadyo xan ah Maamuuskan 9X ayaa ugu dambeyntii laga bilaabay Spain si rasmi ah. Taleefanka ayaa awood u yeelan doona in toddobaadkan si rasmi ah loo iibsado. In kasta oo xilligan la joogo ay ka suurtoobi karto oo keliya Telefoonka Guriga iyo MediaMarkt, iyo sidoo kale bogga rasmiga ah ee shirkadda. Sida loo maleynayo, sidoo kale waxaa laga bilaabi doonaa dukaamo kale wax yar, laakiin ma jiro wax faahfaahin ah oo la xaqiijiyay ama laga bixiyay arrintan. Marka waa inaan sugnaa waa inaan waxbadan ka ogaano arintaan astaanta lafteeda.
Qalabku wuxuu ku yimaadaa nooc gaar ah suuqa. In kasta oo aan kala dooran karno madow iyo buluug kiiskan. Qiimaha Honor 9X ee Isbaanishka waa 269 euro. Waa qiimo wanaagsan qaab ku dhex jira qaybtan suuqan, taas oo shaki la'aan ka dhigaysa ikhtiyaar in la tixgeliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Honor 9X ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain